Terms And Condition - Sarudza bhonasi Your
bhonasi Izvi zvichava tichishingaira pakati 26th January-1st February 2017 GMT.GMT rinoenderana ACST -9.30hrs, -1hr INO, PTZ + 8hrsDeposit kushoma pakati £ 10 uye kuwana 50% dhipozita mutambo bhonasi kusvikira £ 100 OR dhipozita pamusoro £ 200 uye kuwana 10% vakakwira £ 25 mari.
bhonasi ichi chete zvinoshanda hwako zvachose deposits pamusoro promotional nguva.
Bhonasi kana mari ichakurukura kuti 3 kushanda mazuva kubva kumagumo kukwidziridzwa kuti kushevedzwa account.Standard wako wagering zvinodiwa 30x inouya mari kushandisa pamberi bhonasi kana runoenzanirana winnings inogona kutorwa.
Managment Matura kodzero kukanzura, vanodimbura kana kushandura chero makwikwi kana kukwidziridzwa (kana mitemo yayo) chero nguva uye pasina risati ziviso.
General Terms uye Conditions anoshanda. Management kuti mutongo wokupedzisira dzose nyaya.